မာတင်လုသာနှင့် ရန်သူမာန်နတ် | Martin Luther and the Devil | Real Conversion
ဒေါက်တာအာရ် အယ်လ်ဟိုင်မာ ဂျေအာရ်၏
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၃၀)ရက်၊ လောစ့်အိန်ကျယ်လိတ်မြို့ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ ဘာသာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနေ့၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
Lord’s Day Evening, October 31, 2011
“သမ္မာသတိရှိလျှက်မအိပ်ဘဲ စောင့်နေကြလော့။ သင်တို့၏ ရန်သူမာန်နတ်သည်၊ ဟောက်သောခြင်္သေ့ထဲ့သို့ အဘယ်သူကို မျိုရမည်နည်းဟူ၍ Sည့်လည်ရှာဖွေလျှက်ရှိ၏ (၁ပေ၅း၈)။
ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပါတ်သက်၍ (၁၄၈၃-၁၅၄၆) ခုနှစ်၊ မာတင်လုသာ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊”မကောင်းဆိုးဝါးဝိညာဉ် ဆိုးများသည်၊ မအိပ်မနေ၊ ညာဏ်နီ၊ ညာဏ်နက်အသုံးပြုကာ ဆာလောင်နေသောခြင်္သေ့အလားဟောက်လျှက်အ ဘယ်သူကို မျိုရမည့်ကို လှည့်လည်သွားလာနေသည်ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ (Mမေအငည Lကအ့နမ. Th.D. ယ Commentary on Peter and Jude, Kregel Classics, 1990 reprint, p. 218; comment on I Peter 5:8).
ဒေါက်တာလန်းစကီးပြောကြားခဲ့ရာတွင်၊”ထိုအချိန်တွင်နီရိုးဘုရင်၏ ကြာက်လန့်ဖွယ်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ကို သနားစရာ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး ဒုက္ခသည်များအား ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စေခဲ့သည်ဟု ဆို၏။ ဗ.D ၆၄. အောက်တိုဘာလလောက်တွင် ပြင်းထန်သော ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းရှိခဲ့သည်။ ရှင်ပေတရုသည် မာတုရအသေခံခဲ့ ရ၏။ စာတန်မာန်နတ်သည် ထိုကဲ့သို့ အမြဲတစေညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းလည်းမလုပ်ခဲ့ပါ။ (R. C. H. Lenski, Th.D., The Epistles of St. Peter, St. John and St. Jude, Augsburg Publishing House, 1966, p. 225).
ပထမရာစု၃ရာစုလောက်က၊ မာန်နတ်ဟူ၍ ခေါ်တွင်လောက်သော ရှေးခေတ်ရောမတို့၏ညှင်းပန်းနှိပ် စက်မူကြီးသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့ကို တစစီဖြိုဖျက်အစိပ်စိပ်မွှာမွှာကွဲပြားစေခဲ့သည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် ရှင်ပေတရုက အောက်ပါအတိုင်းရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်
“သမ္မာသတိရှိလျှက်မအိပ်ဘဲစောင့်နေကြလော့။ သင်တို့၏ ရန်သူမာန်နတ်သည် ဟောက်သောခြင်္သေ့ကဲ့သို့ အဘယ်သူကို မျိုရမည်နည်းဟူ၍ လှည့်လည်ရှာဖွေလျှက်ရှိ၏ (၁ပေ၅း၈)။
မာတင်လုသာ ခေတ်တုန်းက မာန်နတ်သည် စူးစူးရှရှဟိန်းဟောက်မွှေနှောက်ညှင်းပန်းနှပ်စက်နေသကဲ့သို့၊ ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းအစုလိုက်၊ အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်းသည် ယနေ့တရုတ်နိူင်ငံတွင် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအသွင် ပြောင်းလဲရေးကာလဖြစ်၍သော်၎င်း၊ တစ်ဖက်စွန်းရောက်မူစလင်တို့၏ ခြိမ်းခြောက်တိုက်ခိုက်ထိုးနှက်မှုသည် ဖြစ်နေဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်လည်း မာန်နတ်၏ ဟိန်းဟောက်ခြင်းသည် နောက်ကမ္ဘာခြမ်းတွင်မတွေ့ရပေ။ မသိသာမထင်မရှား သောနည်းလမ်းအသုံးပြု၍ လူအများကို “ဝါးမျို” နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ငွေကြေးဓနများသာအရေးကြီး၏ဟူ သော၊ ရုပ်ဝါဒဖြင့် လူများတို့ကို သတိမေ့မျှောလျှက် ငိုက်မျဉ်းအိပ်ပျော်စေပြီး၊ မျက်မှောက်တော်၌ ဘုရားရှင်ရှိနေခြင်းကို မေ့လျှော့စေသော နည်းလမ်းကို မာန်နတ်သည် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ မာန်နတ်သည် လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်စွာဖြင့် ယနေ့အမေရိကန်နှင့် အနောက်နိူင်ငံများကို ဝါးမျိုနေသည်။ မသိနားမလည်နိုင်သော နည်းလမ်းဖြင့် မာန်နတ်သည် အလုပ်လုပ်နေပြီး သူ၏ ပန်းတိုင်သည်လည်း”သူဝါးစားဖို့သူ့ကို ရှာဖွေစေခြင်း” သည်သာဖြစ်၏။ ခရစ်တော်မိန့်တော်မူသည်မှာ “မာန်နတ်သည် ရှေ့ဦးစွာမှစ၍ လူအသက်ကို သတ်သောသူ ဖြစ်၏(ယော၈း၄၄)၌ ဖေါ်ပြရေးသားထားပါသည်။ မာန်နတ်၏ အမည်နောက်တမျိုးသည် “အဗဒ္ဒုန်ဟူသတည်း (ဗျာ၉း၁၁)။ အဗဒ္ဒုန်၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်မှာ “အဖျက်မှောက်သမား” ဟုမည်၏။ မာန်နတ်သည် လျိုဝှက်၍ သော်၎င်း၊ ပွင့်လင်းစွာဖြင့်သော်၎င်း၊ မာန်နတ်သည် လူသားဝိညာဉ်များကို ဝါးမျိုရန်၊ သတ်ဖြတ်ရန်နှင့် ဖျက်ဆီးရန်သာကြီုးစား လုပ်ဆောင်နေသည်။ ယနေ့အမေရိကန်နိူင်ငံ နှစ်ခြင်းအသင်းအသင်းတော်၊ သင်းအုပ်ဆရာများကြုံတောင်ကြုံခဲ့ စာတန်မာန်နတ်အကြောင်းကို တရားဒေသနာတော် မဟောကြားရလေအောင် စာတန်သည် တိတ်တိတ်ပုန်းတားဆီးလျှက်အောင်မြင်ဝင့်ကြွားလျှက်ရှိနေပေပြီ။ အဘယ်မျှလောက် ဝိညာဉ်မျက်စိ ကန်းနေရကြမည်နည်း ယနေ့ စာတန်မာန်နတ်၏ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်မှု အားလုံးကို မိမိတို့ အသင်းတော်၌ ဟောကြားဖို့လိုအပ်နေပြီ။
ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ ရူးသွပ်နေပြီးလား အမေရိကန်နိူင်ငံရယ်! နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းအစီစဉ်၊ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကြီးကျင်းပခြင်းအစီစဉ်၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း နေ့ထူးနေ့မြတ်အတွက် နိူင်ငံတော်ပိုင် ကျောင်းများ၌ ကျင်းပဖို့ပိတ်ပင်ခဲ့ကြပြီး နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစာသင်ခန်း၊ အတန်းများကို စာတန်မာန်နတ် အလိုကျအတိုင်း ကလေးသူငယ်များအား နတ်ဆိုးအသွင်၊ စုန်းမ၊ သွေးစုပ်စုန်း အသွင်ဝတ် ဆင်စေကြပြီး မိမိတို့အတန်းကျောင်းများကို အလှဆင်ဆင်နွဲခဲ့ကြပါသည်တကား။ သမ္မာကျမ်းစာတော် မိန့်တော်မူသည်ကား “ပညာရှိယောင်ဆောင်လျှက်နှင့် လူမိုက်အရာ၌တည်ကြသည်ဖြစ်၍။(ရောမ၁း၂၂)၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ ရှိတ်စပီးယား ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “အဘယ်မျှလောက်ရူးသွပ်ကြမှာလဲ သေမျိုးလူသားရယ်” ဟူ၍ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
ဤအကြောင်းအရာများသည် ကျွန်ုပ်တို့အား မာတင်လုသာထံပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။ သူ့ကို ၂၀ရာစု တုန်းက လွတ်လပ်စွာ တွေးခေါ်သော ကျမ်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်များက စာတန်နှင့် ဝိညာဉ်ဆိုးများအကြောင်း အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးထားချက်အပေါ် အမြဲတမ်းပြစ်တင်စွပ်စွဲခဲ့ကြပါသည်။ ယနေ့ခေတ်သစ်ပြောင်းလဲခြင်းမလို လားသော မာတင်လုသာ နောက်လိုက် အီဝပ်အမ့် ပလက်စ်ကပင်လျှင် မာတင်လုသာ၏ မာန်နက်နှင့်ပါတ်သက်၍ ရေးသားဖေါ်ပြချက်များအပေါ် ဝေဖန်ပြစ်တင်လျှက်ရှိသည်။ ပလက်စ်က ဆက်၍ ပြောကြားသည်မှာ”မာတင်လုသာသည် စာတန်မာန်နတ်၏ လုပ်ဆောင်ပိုင်သော တန်းခိုးအာဏာထက်ပိုသော စွမ်းအား ရှင်သဘောဆောင်၍ ပြောကြားခဲ့၏ သဘာ၀အကြောင်းတရားအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို စာတန်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက် နေသည်ကိုတော့ စိုးစိမျှသံသယမရှိပါဘူး”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြီးနောက် ပလက်စ်က မိမိကိုကို ကာကွယ် ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ “စာတန်သည် သာမန်ထက် စွမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟူသော အရာသည်ဖြစ်နိူင်ချေရှိ၏ ထို့ကြောင့် စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကြံကြံခံနိုင်မူကိုပင် တိုက်ရိုက်ဖျက်ဆီးနိူင်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ (Ewald M. Plass, What Luther Says, Concordia Publishing House, 1994 edition, pp. 391-392).
ဒေးဝိဒ်အယ်လ့် လာဆန်ကလည်း မာတင်လုသာ၏ စာတန်မာန်နတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ရေးသားဖော် ပြခြင်းအပေါ် သေးသိမ်အောင်နှိမ်၍ ရေးသားပြောကြားခဲ့သည်မှာ “မာတင်လုသာသည် အလယ်ခေတ်တုန်းက ဘုရားရှင်နှင့် စာတန်မာန်နတ်ကြား သော့ခတ်ပိတ်ထားသော တိုက်ခိုက်မှုကြားက လူသားအားလုံးအကြောင်းနှင့် စာတန်အား အဆုံးသတ်တရားစီရင်သောနေ့သည် အလျန်အမြန် ရောက်လာနေသည်ကို သိမြင်သူဖြစ်သည်”ဟူ၍ ရေးသားဖေါ်ပြ ထားပါသည်။ (David L. Larsen., M.Div., D.D., The Company of the Preachers, Kregel Publications, p. 153).
ဒေါက်တာလာဆန်သည်၊ လုသာ၏၊ မာစတာဒီဂရီ သင်ကြားလေ့လာသင်ယူခဲ့သော တို့၌ မာတင်လုသာ၏ မာန်နတ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရေးသားချက်များအပေါ် အမှားရှာဖွေခဲ့သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ဖူးပါသည်၊ ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားသော သူတို့၏ အမှားကို ရှာပြီးအပြစ်တင်စွပ်စွဲသော ကျောင်းသားများတွေပေါဗျာ့၊ ဒါကြောင့် ကျွန်ုပ်ကျောင်းပြီးခဲ့ သော၊ ကျောင်းနှစ်ကျောင်းအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်ပြောတာပေါ့၊ ကျွန်ုပ်ကတော့၊ ထိုကျောင်း၌ သွန်းသင်သမျှအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်၊ လာဆန်ကျတော့မစွန်းလွှတ်ခဲ့ဘူး၊ ထို့ကြောင် လာဆန်က မာတင်လုသာ အကြောင်းကို သေးသိမ်အောင်ရေးသားခြင်းဖြစ်တယ်၊”မာတင်လုသာသည် အလယ်ခေတ်တုန်းက သော့ခတ်ထားသော ဘုရားရှင်နှင့် စာတန်မာန်နတ်တို့၏ တိုက်ပွဲကြားက နက်နဲသောလူသားအားလုံးအကြောင်း နှင့် စာတန်မာန်နတ်ကို တရားစိရင်ဖို့ အလျန်အမြန်စီရင်ရာနေ့ မြန်ဆန်လျှက်ရောက်လာနေသည်ကို သိသောသူ ဖြစ်သည်”ဟူ၍ ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။ မည်သည့်အရားများမှားနေပါသနည်း၊ အဘယ့်ကြောင့် အလယ်ခေတ်ကလူဟူ၍ သုံးနှုန်းဖို့လိုပါသနည်း၊ အလယ်ခေတ်တုန်းက မာတင်လုသာသည် ဂျူးလူးမျိုးများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောကြားချက်များနှင့်၊ အခြားသောအကြောင်းကိစ္စများအတွက် ကျွန်ုပ်လည်းငြင်းပယ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ဘုရားရှင်နှင့်စာတန်ကြား သော့ခတ်လျှက် နက်နဲစွာ ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုကြား၌ လူသားများရှိနေ သည်ဟု ပြောဆိုရာတွင် လုသာ၌ အမှားမရှိပါဘူး၊ အဘယ်ကြောင်ဆိုသော သမ္မာကျမ်းစာ၌ ထိုကဲ့သိ့ဖေါ်ပြထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
“သမ္မာသတိရှိလျှက် မအိပ်ဘဲစောင့်နေကြလော့။ သင်တို့၏ရန်သူမာန်နတ်သည်၊ ဟောက် သောခြင်္သေ့ကဲ့သို့ အဘယ်သူကို မျိုရမည်နည်း၊ လှည့်လည်ရှာဖွေလျှက်ရှိ၏ (၁ပေ၅း၈)
စာတန်မာန်နတ်နှင့် အပေါင်းအပါ ဝိညာဉ်ဆိုးများအကြောင်း မာတင်လုသာပြော ကြားချက်များသည် များသောအားဖြင့် မှန်ကန်ပါသည်။
၁။ ပထမ၊ စာတန်မာန်နတ်၏ မူလဇတ်မြစ်ကို မာတင်လုသာ ပြောကြားချက်များသည် များသောဖြင့် မှန်ကန် ပါသည်။
ဟစာတန်သည် မည်သည့်နေရာမှ အစပြုရောက်ရှိလာပါသနည်း] ကျဆုံးသွားသော ကောင်းကင်တမာန်များသည် မှောင်မိုက်တန်ခိုးကို စိုးရသော ဝိညာဉ်ဆိုးများအဖြစ် ပြောင်းလဲလာကြပါသည်။
“အိုနံနက်သား၊ မိုးသောက်ကြယ်၊ သင်သည်ကောင်းကင်ကကျလေပြီတကား၊ အပြည် ပြည်fffတို့ကို နှိပ်စက်သော သင်သည် မြေတိုင်အောင်ခုတ်လှဲခြင်းကို ခံရလေပြီတကား။ သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ ငါတက်မည်၊ ဘုရားသခင်၏ ကြယ်တို့အပေါ်မှာ ငါ့ပလ္လင်ကို ငါချီးမြောက်မည် မြောက်မျက်နှာဘက် ဗျာဒိတ်တော်ပေါ်မှာ ငါထိုင်မည် မိုးတိမ်ထိပ်ပေါ်သို့ ငါတက်မည် အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားသခင်ကဲ့သို့ ငါနေမည်ဟုအ ကြံရှိလေပြီ။ သို့သော်လည်း၊ သင်သည်မရဏာနိုင်ငံ၊ သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့ နှိမ့်ချခြင်း ကို ခံရလေပြီ။ (ဟေရှာ၁၄း၁၂-၁၅)။
ဘုရားရှင်သည် ကောင်းသောကောင်းကင်တမန်များကိုသာ ဖန်းဆင်းထားခဲခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ဆိုးသော ကောင်းကင်တမန်များရှိလာ၏။ နုတ်ကပတ်တော် သမ္မာတရား၌ တည်မနေတော့ပဲ မှားယွင်းသော ကောင်းကင်တမန်နောက်သို့ လိုက်ကြ၏။ မိမိတို့ မာနအားဖြင့် ကျဆုံးရခြင်းဖြစ်ကြ၏။ သူတို့သည် ဘုရားရှင်သားအရာ၌ မနှစ်သက် တော့၍၊ ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြပြီး၊ ဘုရားရှင်၏ နေရာအပေါ်၌ ထိုင်နေလိုကြသည်။ (ဏူassယ ငဘငိ.ယ စ. ၃၉၁).
လုသာပြောသမျှကို ကျမ်းစာက ထောက်ခံပါသည်။ လုသာနှင့် ကျမ်းစာတော်မြတ်နှစ်ခုစလုံးက၊ (ယေဇကျေလ၂၈း၁၃-၁၇)ကို ကျွန်ုပ်တို့အားထောက်ပြနေသည်
“ဧဒင်အရပ်၊ ဘုရားရှင်၏ ဥယျဉ်တော်၌နေပြီ။ သင်၏ခေါင်းပေါ်မှာ ကျောက်နီ၊ ဥသာဖရား၊ စိန်၊ မျက်ရွဲ၊ကြောင်၊ နဂါးသွဲ့၊နီလာ မြ၊ ပတ္တမြား၊ အစရှိသော ကျောက်မျက်အမျိုးမျိုးတို့ကို ဆောင်းလေ၏ ရွှေဖြင့်လုပ် သော၊ပတ်သာ၊ ပုလွေတို့သည်လည်း၊ သင်ဖွားသောနေ့၌ပင် သင့်အဖို့ပြင်ဆင်လျှက်ရှိ က၏။ သင်သည်လွှမ်းမိုးသော ဘိသိက်ခံရသည့် ခေရုဗိမ်ဖြစ်လျှက်၊ ငါအခွင့်နှင့် ဘုရားရှင်၏ သန့်ရှင်းသောတော်ပေါ်မှာ နေရာကျ၍ မီးတောက်သော ကျေက်တို့တွင် သွားလာရ၏။ ဖွါးသောနေ့မှစ၍ သင့်အပြစ်ထင်းရှားသော နေ့တိုင်အောင် ပြုလေရာရာ၌ စုံလင်လျှက်ရှိ၏။ သို့ရာတွင် ကုန်သွယ်ခြင်းများပြားသောအားဖြင့် အဓမ္မာတို့နှင့် ပြည့်စုံ၍ ပြစ်များသော အပြစ်ရောက်လေပြီ။ ထို့ကြောင့်၊ ဆိုးယုတ်သူကဲ့သို့ သင့်ကို ဘုရားသခင်၏ တောင်တော်ပေါ်က ငါနှင့်ထုတ်မည်။ အိုလွှမ်းမိုးသော ခေရုဗိမ်၊ မီးတောက်သော ကျောက်တို့ အထဲက သင့်ကို ငါပယ်ရှင်းမည်။ သင်သည် ကိုယ်၌တင့်တယ်ခြင်း အသရေကြောင့်၊ ဝါကြွားသော စိတ်ရှိလျှက် ဂုဏ်ထွန်းတောက်သောကြောင့်၊ သင်၏ ပညာသည် ဖေါက်ပြန်လျှက် ရှိလေပြီ။ ငါသည် သင့်ကို မြေတိုင်အောင်နှိမ့်ချမည်။ ရှင်ဘုရင်တို့သည် သင့်ကို ကြည့်ရှု၍ ဝမ်းမြောက်စေခြင်းငှါ၊ သူတို့ရှေ့မှာ သင့်ကို ငါချထားမည်။ (ယေဇ၂၈း၁၃-၁၇)။
ရှင်ယုဒဩဝါဒစာ၌ ဖေါ်ပြထားသကဲ့သို့ ကျဆုံးသော ကောင်းကင်တမန်းများသည် ဝိညာဉ်ဆိုးနတ် ဆိုးများဖြစ်လာကြသည်။
“ထိုမှတပါးမိမိတို့ အခွင့်အရာကိုမစောင့်၊ မိမိတို့နေရာအရပ်ကို စွန့်ပစ်သော ကောင်း ကင်တမန်တို့ကို ကြီးစွာသောနေ့၌ စစ်ကြောစီရင်ခြင်းအလိုငှါ ထာ၀ရချည်နှောင်ခြင်း အားဖြင့် မှောင်မိုက်ထဲမှာ ချုပ်ထားတော်မူ၏ (ယုဒ ၆ယ) ။
ကျဆုံးလေသော အချို့ကောင်းကင်တမန်းများကို သံကြိုးဖြင့် ချဉ်နှောင်လျှက် ငရဲ၌ လှောင်ထားသည်။ များစွာ သော ဝိညာဉ်ဆိုးများသည် ယနေ့ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိနေကြပါသည်။ လုသာပြောကြားခဲ့သည်မှာ- “ဤကမ္ဘာသည် မာန်နတ်အပေါင်းအပါများစွာ ပြည့်နှက်နေပါသည်”ဟု ပြောကြား၏။ မာန်နတ်ဟူသည် ဝိညာဉ်ဆိုးများပင် ဖြစ်သည်။ ဓမ္မာသီချင်းသီဆိုပါသည်။
(မာတင်လုသာ စတန်ဇာသရီး၊ ရေသားသီကုံးသော တန်ခိုးရှင် အိုအဖ!)
၂။ ဒုတိယ၊ စာတန်မာန်နတ်သည် စိတ်ပျက်အားငယ်စေသောအကြောင်းတရား၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်ဟူသော လုသာပြောကြားချက်သည် မှန်ကန်ပါသည်။
စာတန်သည် စိတ်အားလျော့ငယ်စေသောသူနှင့် သေခြင်း၏ အရှင်သည်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဘုရားရှင်နှင့် မိတ်သာဟာယ ပြုလေရာရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့အား စိတ်ပျက်စေသောသူသည် စာတန်မာန်နတ်ပင်ဖြစ်သည်။ (ဏူassယ ငဘငိ.ယ စ. ၃၉၈).
ဘာသာရေးအသွင်ပြောင်းလဲစေသူက စာတန်အား စိတ်ပျက်အားငယ်စေသူကဝိညာဉ်ဆိုး ဟူ၍၎င်း၊ အလင်းနှင့်ထာ၀ရအသက်ကို မုန်းတီးသူနှင့် လူ့အသက်ကို သတ်ဖြတ်သူဟု ဆို၏။ မှောင်မိုက်တန်ခိုးမင်းနှင့် စိတ်ပျက်အားငယ်စေသောဝိညာဉ်ဆိုးဖြစ်သောကြော င့် မှောင်မိုက်ထဲကျရောက်စေဖို့ လူသားတို့အားသွေးဆောင်နေ၏။ လူသားတို့အားအပြစ် သားပမာမျှော်လင့်ချက်မဲ့စေ၏။ (Comment on Luther, Plass, ibid. pp. 397-398).
-မာန်နတ်သည် ကြောက်လန့်ဖွယ် အတွေးများကို စိတ်နှလုံးသားထဲသို့ပစ်ခတ်၏ ဘုရားရှင်ကို မုန်းတီးစေ၏။ အပြစ်တင်စေ၏၊ စိတ်ပျက်အားနည်းစေသည်။ ၎င်း ကို (ဧဖတ်၆း၁၆)၌ မီးစက်လက်နက်ဟူ၍ ခေါ်သည်။ (Plass, ibid, p. 399).
ဤအရာများယနေ့ လူသားများ၌ ဖြစ်ပျက်ခံစားစေသည်။ အသင်းတော်လူကြီးတပါးက၊ လူငယ်တဦးနှင့် တွေ့ဆုံ ခန်းမ၌ တိုးတိတ်စွာ ပြောကြားစဉ်တွင် ထိုလူငယ်က”ဘုရားရှင်ကျွန်ုပ်တော်ကို မချစ်ဘူး” “ယေရှုလည်း ကျွန်ုပ်ကို မချစ်ဘူး”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့၏။ လုသာပြောကြားသကဲ့သို့ ထိုအတွေးခေါ်တို့သည် စာတန်ထံမှ လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ စာတန်သည် ဘုရားနာမကို ကျိန်ဆဲသူ၊ စိတ်ပျက်အားငယ်စေသူဖြစ်သည် ဟူ၍ ပြောကြားပြီး၊ သင်းထောက်က ကျမ်းစာကို ဖတ်ကြားပေးခဲ့၏။
“ဘုရားသခင်၏ သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီး ခြင်းသို့မရောက်၊ ထာ၀ရအသက်ကို ရစေခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ ၌ တပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင် လောကီ သားတို့ကိုစွန့်တော်မူ၏ (ရှင်ယောဟန်၃း၁၆)။
သင်းထောက်က၊ သင်ဤကျမ်းကို ယုံကြည်တယ်မလားဟူ၍ မေး၏ အဖြေကို မဖြေဆိုခဲ့ပါ။ စာတန်မာန်နတ်က ဖြေဆိုဖို့ဆီးတားခြင်းပဲဖြစ်သည်။ မာန်နတ်သည် “နုတ်ကပတ်တော်ကို ကြားပြီးနာခံလိုက်လျှောက်မည်ကို” မလိုလားပေ။ လုသာကပြောကြားခဲ့သည်မှာ “စာတန်မာန်နတ်၏ ညာဏ်နီ၊ ညာဏ်နက်က ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားရှင် ၏နုတ်ကပတ်တော်ကို နားမထောင်စေလိုပါ”။ (Plass, ibid., p. 396)
အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကလည်း သင်းထောက်အား ထိုသို့ပြောကြားခဲ့၏ ကျွန်မ၏ ဘုရားရှင်၏ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းမခံစားရဘူး၊ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်တော့မသိရဘူးဟူ၍ ပြောကြခဲ့၏။ ဘာကြောင့်ဆိုသည်ကို အမျိုးသမီးငယ်မသိရသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တော်ကသိနေတယ်၊ အပြစ်ခွင်လွှတ်ခြင်းမခံ စားရခြင်းက ဘုရားရှင်၏ကတိတော်ကို ကိုးစားရမည့်အစား ထိုအတွေးကို စာတန်က သူမ၏စိတ်ထဲ၌ ထည့်သွင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ “ငါထံသို့ လာသောသူကို ငါသည်အလျင်းမပယ်”ဟူသော ခရစ်တော်၏ တရားစာကားကို ငြင်းဆန်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည် (ယောဟန်၆း၃၇)။ လုသာပြောကြားသကဲ့သို့ “မာန်နတ်သည် ကြောက်လန့်ဖွယ်အတွေးများကို စိတ်နှလုံးသားထဲသို့ ထည့်သွင်ပေးသည်။ မာန်နတ်၏ဥာဏ်နီဥာဏ်နက် သွေးဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားရှင်၏ နုတ်ကပတ်တော်ကို နားမထောင်စေလိုပါ”။
၃။ တတိယ၊ စာတန်မာန်နတ်အားဖြင့် စိတ်ပျက်အားငယ်စေခြင်းသည် ဝိညဉ်တော်ကအပြစ်ကို ဖေါ်ပြပေးခြင်းနှင့် မတူညီပါဟူသော လုသာ၏ ပြောကြားချက်သည် အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။
လုသာက စိတ်ပျက်၊ အားငယ်စေခြင်းသည် စာတန်မာန်နတ်မှ ဖန်တီးသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏ အပြစ်ကို ဖေါ်ပြခြင်းသည် ဘုရားရှင်ထံတော်မှ လာရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နုတ်ကပတ်တော်က၊ တူညီသော ထူးခြားချက်ကိုပေးသည်။
“အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်နှင် ညီသောဝမ်းနည်းခြင်းသည ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်စေပြီးဝမ်နည်းပက်လက်ဖြစ်ကျန်ခဲ့ခြင်းမရှိ၊ လာကီဝမ်းနည်း ခြင်းမူကား သေခြင်းကိုဖြစ်စေတာ်၏ (၂ကော၇း၁၀)
လုသာက စစ်မှန်သော အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း မတိုင်ခင်မိမိအပြစ်နှင့်ပါတ်သက်၍ ဝမ်းနည်းခြင်းရှိရ မည်ဟုပြော၏။
အစစ်အမှန်ပြောင်လဲခြင်းအတွက်၊ နိုးကြားသောအသိစိတ်ဓါတ်ဖြင့် ကြောက်ရွှံ့သောစိတ်ရှိ ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့တွေ့ကြုံခံစားပြီးပါက သင်သည် အသစ်တစ်ဖန်ပြုပြင်ခြင်းခံ ရမည်ဖြစ်သည်။ထိုအခါသင်ဖြေသိမ့်စရာရှိလာမည်၊ထိုဖြေသိမ့်စရာသည်သင့်နှလုံးသားထဲက လာရောက်ခြင်းမဟုတ်တော့ပါ။ ဘုရားသခင် အထံတော်ပါးက လာရောက်ခြင်းပင်ဖြစ် သည်။ ဘုရားရှင်သည် သားတော်ယေရှုအားစိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့သူတို့အဖို့သနားခြင်း၊ ဂရုဏာ တော်ရှိခြင်းကို ကြော်ငြာဖို့ ဤလောကသို့ စေလွှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့အသစ်ပြု ပြင်ခြင်းသည် ဤကဲ့သို့ ဖြစ်ပျက်လာမည်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားနည်းလမ်းဖြင့် မဟုတ်နိုင်ပါ။ (ဏူassယ ငဘငိ.ယ စ. ၃၄၃).
ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟု အခေါ်ခံရခြင်းသည်။ အပြစ်နှင့်သေခြင်းမှ ရွေးနုတ်ပေးသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ မိမိကိုကိုကြိးKစားခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့်အရာအား ဖြင့်ကြီုးစား၍လည်းမဟုတ်ပါ၊ ချစ်တော်မူသော သားတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကယ်တင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ (Plass, ibid, p..343).
ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟု အခေါ်ခံရခြင်းသည်၊ ယေရှုခရစ်ကို Hkကြည်ပြီးစကားတော်ကို နာခံခြင်းအပြင် မည်သည့်အရာအားဖြင့် မရနိုင်ပါ။ (Plass, ibid, p.707).
ဤထူးခြားချက်ကို ကျမ်းစာတော်နှင့် အညီခွဲထွက်သောသူများနှင့် ဂန္တဝင်မြောက် နှစ်ခြင်းအသင်းတော်များက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမား မာတင်လုသာ၏ အဆိုကိုသဘောတူကြပါသည်။ တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလု ပြောကြားရာတွင်၊ “သခင်ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကြလော့။ ယုံကြည်လျှင် သင်နှင့် သင်၏အိမ်သူအိမ် m;တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည် (တမန်၁၆း၃၁)၌ ဖေါ်ပြထား ပါသည်။ ဤထက်ပိုသောအရာမလိုအပ်တော့ပေ။ ခရစ်တာ်၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါသည်။ သင်တို့၏ သီချင်းစာအုပ်ထဲကနံပါတ်(၃)ကို သီဆိုကြပါစို့!
-ခိုင်မာသော ရဲတိုက်ကြီး မြေကတုတ်တံတိုင်း ဘုရားရှင်
ဖျားနားခြင်း ကင်းဝေးစေသော မေတ္တာဂရုဏာရှင်
ကာလအစဉ် ဆိုးညစ်ရန်သူသည် ပေးလျှက်နေဒုက္ခဝေဒနာ
ပရိယာယ်သည် နက်နဲလှ၊ ကြီးမြတ်သောတန်းခိုး
-မာန်နတ်ဆိုးများပြည့်နက်၍ ခြောက်လှန့်သော ဤကမ္ဘာ
စာတန်ဒေါသအမျက် ငါတို့သည် ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိ
ဝိညာဉ်တော်နှင့် သခင့်ကျေးဇူး ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အစဉ်ရှိလေသည်
ခန္တာကိုယ် အသေသတ်လည်း၊ ဝိညာဉ်သည် အစဉ်အသက်ရှင်
(၁၄၈၃-၁၅၄၆၊ မာတင်လုသာ သီကုံးသော”ဘုရားရှင်သည် ကြီးမားသောရဲတိုက်”ကို ၁၈၀၅-၁၈၉၀၊ ဖရိဒရိတ်စ် ဟစ်ခ်ျက ဘာသာပြန်သီဆိုသည်။
လူသာ၏ ဘ၀အသက်တာကို စပါဂျန်လာ ဖေါ်ပြမှုအကျဉ်း
“ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည် (ရောမ ၁း၁၇)
-မာတင်လုသာ၏ ဘ၀အတွေ့အကြံထဲက အရေးကြီး၍မသာယာသော ဖြစ်ရပ်ကို အကျဉ်း ချုံးပြီး ဖေါ်ပြပေးပါမည်။ ကြီးမား၍ ကျော်ကြားသော ဘာသာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပေးသူဖြစ်ပြီး ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို နှေးကွေးသော အဆင့်ဒီဂရီဖြင့် ပျက်ပြား စေသူဖြစ်သည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ နုတ်ကပတ်တော်တည်းဟူသော”ဖြောတ်မတ် ရာ၌ တည်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်”ဟူသော နုတ်ကပတ်တရားတော်အားဖြင့် ချဉ်နှောင်ခြင်း ခံရလေ၏။ ဤသည် ကောင်းကင်ဘုံကပေးသော ပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်ဖြစ်၏၊ သို့သော်လည်း သူသည် ၎င်းနှင်ပတ်သက်နေမှုကို အကုန်အစင်နားလည်းခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဘယ်နည်းနှင့်မှ နားမလည်ခဲပဲ၊ ဘာသာရေး သဘောတရားကို ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းဆိုင်ရာ ကျင့်သုံးအတိုင်းသာ ဆက်မြဲဆက်လေ၏ မှားယွင်းမှုများကြောင်း၊ အဖန်ဖန်နောင်တရစေကာမူ၊ သိနားလည်ခြင်း၌ တိုးတက်မ လာခဲ့ပါ၊ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းအရှက်ရစေခဲ့၏၊ မောမောပန်းပန်း လုပ်ဆောင်သည့် တိုင်အောင် ရှင်းလင်းသေချာအောင် သိရှိခဲခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သူသည် မိမိကိုကို မိမိသေ ခြင်းတံခါးထိတိုင် ပို့ဆောင်ခဲ့လေ၏။ သူသည် ရောမမြို့ကို ခရီးဆက်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့၏ ထိုမြို့၌၊ သမ္မာကျမ်းစာကို ရှင်းလင်သိသော အသင်းတော်ရှိနေ၍ဖြစ်သည်။အကြောင်း မှာ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း အကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ သင်ရှင်းလင်းစွာ သိရမှာဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသော နည်းလမ်းများအားလုံးကို သင်နားလည်းသဘောပေါက်မည် ဖြစ်သည်။ သူသည် သန့်ရှင်းသော ရောမမြို့ကို သွားဖို့စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့၏၊ သို့သော် လည်း သူသည် ထိုမြို့၌ရှိ သူတော်ကောင်းယောင်ဆောင်သူများ၏ ခြောက်လှန့်ခြင်း၊ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်တွင်းထဲ၌ ပစ်ချ၍ အစာကျွေးခြင်းခံရမည်ကို တွေးကြောက်ခဲ့၏ ရောမမြို့၌ အပြစ်ဒဏ်စီရင်ဖို့ ငရဲကို အဆောက်အဦးအမြင့်ဆုံး၌ ဆောက်လုပ်ထားပြီး ထိုနေရာဖြင့် ကမ္ဘာဆုံးတခုလုံးကို မြင်တွေ့နိုင်သည်ဟူသော သူတပါး ပြောစကားကို ကြောက်လန့်ခဲ့၏။ သို့သော သူ၏အမှားများကို ပုပ်ရဟန်မင်းထံဝန်ခံပြီးအေးဆေးစွာ နားယူဖို့ ရှာဖွေခဲ့၏။ သို့ပါသောလည်း မည်သည့်အရာကိုမှ မတွေ့ရမခံစားရခဲ့ပါ (နောင်တွင်) အရှင်ဘုရားက သူ၏ယုံကြည်ရာ သဘောတရား ခံယူချက်မှ လွတ် မြောက်စေသည်။ ယစ်ပုရောဟိတ်မင်းထံအပြစ်ဝန်ချတောင်းပန်းခြင်းနှင့် ညာဏ်နီ၊ ညာဏ်နက်အားဖြင့် မလွှတ်မြောက်နိုင်၊ အမှားကို ဝန်ခံခြင်းအားဖြင့် မလွှတ်မြောက် နိုင် လူသားတို့၏ လုပ်တောင်မှု၊ အသက်ရှင်မှုအားဖြင့် လူသည် ထာ၀ရအသက် မရှင်နိုင်၊ ခရစ်တော်သည်အထံ၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ အသက်ရှင်ရသည်ကု သိရှိလာခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မာကျမ်းစာက၊ ရောမကာသိုလ်လစ် ဘုန်းတော်ကြီးများ၏ ဝိညာဉ်ကို ငရဲ့၌မီးလောင်စေပါသည်။
“ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်” (ရောမ ၁း၁၇)။
နောက်တွင် လုသာသည် သမ္မာကျမ်းစာကို နာလည်းသွားသဖြင့် ခရစ်တော်တပါးတည်းကိုသာ ယုံကြည်အားကိုး ခဲ့ပါသည်။် သူသည် သူ့အမေထံ ဤကဲ့သို့စာရေးသားခဲ့သည်။ “ကျွန်ုပ်ကို ကျွန်ုပ်ခရစ်တော်၌ အသစ်တဖန်မွေး ဖွါးပြီးမှသာ ပါရဒိသုဘုံသို့ ဝင်စားနိုင်ပါသည်”ဟူ၍ ရေးသားခဲ့သည်။ စပါဂျန်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ-
များမကြာခင်၊ သူသည် မိမိ၏အသိတရားပြုမူကျင့်ကြံခြင်းထက်နုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခဲ့သည်။ (ယစ်ပုရောဟိတ်၊ တက်ဇောလ်သည် ဂျာမနီနိုင်ငံသို့ သွားရောက် ခဲ့ပြီးအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းစာစောင်ကို မြောက်များစွာ ငွေကြေးဖြင့် ရောင်းခဲ့သည်။ -မည်သည့် မသင့်လျှော်သော ပြစ်မူကို ကြူးလွန်ပါသော်လည်း၊ သင့်အပြစ်ခွင့် လွှတ်ဖို့ ကြေးငွေကို ပေးလိုက်ခြင်း တခပ်စာတွင် သင့်အပြစ် ပြေပျောက် သွားပြီးဖြစ်သည်။ လုသာသည် ထိုမတရားမူကို ကြား၍ ဒေါသထွက်လျှက် “သူ၏ မဟာစည်ပိုင်းကြီးကို ငါအပေါက်ဖေါက်ပစ်မည်” ဟူ၍ ကြွေးကြော်၏။ အမှန်တကယ်ပဲ လူသာသည် အခြားသော မဟာစည်ပိုင်းကြီးကိုပင် အပေါက်ဖေါက်ပစ်ခဲ့၏။ အသင်းတော်ဘုရားကျောင်း အဝင်ပေါက်၀၌မာတင်လုသာ ထုတ်နုတ်၍ ရေးသားသော စာတမ်းကို ကပ်ထား၏။ မာတင်လုသာက၊ အပြစ် ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် ခရစ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သာလျှင် ရရှိခြင်းဖြစ်ပြီးငွေကြေး တန်ဖိုးဖြင့် ဝယ်ယူ၍ မရနိူင်ကြောင်း ကြော်ငြာစာ ကပ်ထား၏။ ပုတ်ရဟန်း မင်းကြီး၏ အပြစ်ခွင့်လွှတ်စာစောင်သည် မကြာမီ ရယ်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်သာမည်ဟူ၍ ကြွေးကြော်ခဲ့၏။ မာတင်လုသာသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ခဲ့၏။ အမှားကို လူသိရှင်ကြား အတိုက်အခံ ဆန့်ကျင့်ခြင်းကို ခံရသဖြင့် တဖက်မှာ ဆိတ်ညိမ်နေသော်လည်း၊ ခြသေ့F တစ်ကောင် သားကောင်ကို ဝါးမျိုဖို့ ဟိန်းဟောက်သည့်အလား ဒေါသထွက နေပေ၏။ သူ၌ ပြင်းထန်သောခံစားချက် များပြည့်နှက်သော ဘ၀အသက်တာဖြင့် ရန်သူတို့ကြား စစ်ပွဲဆင်နွှဲဖို့ပင် ရွေ့သွားခဲ့၏။နောက်တွင် မာတင်လုသာကို အော့စဘာစ့်သို့ အစစ်ဆေးခံဖို့ တမန်ဆင့်ခေါ်ခံခဲရသော်လည်း သူ့အပေါင်း အဖော်များက ထိုနေရာသို့ မသွားရောက်ရန် တားဆီးခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ သူ့အပေါင်း အဖော်များက၊ တစ်ကိုယ်ထဲ အင်ပါယာ အုပ်ချုပ်ရေး ကောင်စီသို့သွားပြီး မဖြေရှင်းစေလိုခဲ့ပါ။ အကြောင်းမှာ သူ့ကို မီးချို့ဖျက်ဆီး မည်ကိုသိကြ၏။ သို့သော်လည်း သူ၏ အမှန်တရားကို လူတိုင်းအားသိ စေလိုသဖြင့်၊ မြင်းလှည်းဖြင့် တရွာပြီးတရွာ၊ တမြီု့ပြီးတမြီု့ထွက်ဝင်ပြီး သူ၏ကြော်ငြာစာတမ်းကို ဖတ်ကြားခဲ့သည်။ ဆင်းရဲ့သားများက လာရောက်ပြီး ခရစ်တော်သခင်အတွက် မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ဝေငှ သူအား လက်ဆွဲနုတ်ဆက်ခဲ့ ကြသည်။ သူမည်ကဲမည်ပုံဩဂတ် မင်းရဲ့ရှေ့မှာ၊ အသက်ပေးဆပ်သည့်တိုင် အမှန်တရားကို ကာကွယ်ခဲ့သည်ကို စဉ်းစားတွေ့ကြည့်ပေါ့။ သူသည်လည်း ဂျွန်ဟကစ်ကဲ့သို့ သူ၏အရှင်သခင်ဘုရားအတွက် မီးအရှို့ခံသည်တိုင် အမှန်တရား ကို ကာကွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနေ့ ဂျာမနီတရားရုံးတွင် မာတင်လုသာသည် ထောင်ပေါင်းဆယ်ချီသော အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့၏ ထောင်ပေါင်းဆယ်ချီ၍ ကလေးသူငယ်၊ မိခင်တို့အား သူ့ကြောင်းကောင်းကြီး ခံစားရကြ၏ ဘုရားသခင် နာမတော်သည်လည်း ပို၍ ချီးမြောက်ခြင်းခံရလေသည်။ (C. H. Spurgeon, ''A Luther sermon at the Tabernacle", The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1973 reprint, volume xxix, pp. 622-623).
“ဖြောင့်မတ်ရာ၌ တည်သော သူသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်လိမ့်မည်” (ရေမ ၁း၁၇)
၁၉၅၀ ခုနှစ်၊ အစောပိုင်း နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၌ ကျွန်ုပ်တော်မာတင်လုသာနှင့် မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့ ဆုံခဲ့၏။ တနေ့သော တနင်္ဂနွေညမှာ မာတင်လုသာ အကြောင်းအဖြူအမဲ၊ ရုပ်ရှင်ကို ကြည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူသည် အတိတ်ပုံရိပ်ဆန်းများကို စိတ်ဝင်းစားစဉ်းစားနေပုံပေါ်သည် ကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားလောက်သော အကြောင်း အရာ တခုကိုမှသူပြောမသွားခဲ့ဘူး။ ရုပ်ရှင်ကလည်းငြီးငွေ့စရာကောင်းပြီး အလွန်အင်မတန်ကြာခဲ့၏။ ဘာဖြစ် ၍ ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသော ရုပ်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်၏ သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ ဝေါလ်တာအေပစ့်က ပြရသလဲဟူ၍ အံ့ဩမိ၏။ ထိုကြီးမြတ်သော ရုပ်ရှင်၏ထူးခြားနားသော အတွေးအမြင်က အခုကျွန်ုပ်၏ အသိအမြင်ကို ကျယ်စေပြီး ထိုရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ပြီး ပြန်ကြည့်ချင်နေမိသည်။ ၎င်းရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ဖို့ ဤနေရာတွင် နှိပ်ဝင်ပါ။
ကျွန်တော် ဒုတိယအကြီမ် မာတင်လုသာနှင့် မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့ဆုံဖြစ်သည်မှာ ကျွန်ုပ်အသက်တာ ပြောင်းလဲပြီးနောက်တော်တန်ကြာမှ တွေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဂျွန်ဝီစလီ၏ အသက်တာပြောင်းလဲခြင်း အတွေ့အကြုံကို
ဖတ်ကြားခဲ့သည်။ ဝီစလီက ပြောကြားခဲ့သည်မှာ-
တနေ့သောညနေခင်း၌ ကွန်ုပ်သည်စိတ်မပါတပါနှင့် အော်ဒါဂိတ်လမ်းမပေါ်က စာအုပ်တိုက်စာ အုပ်တိုက်တခုသို့ သွားရောက်ခဲ့သည်။ ထိုနေရာ၌ လူတဦးက ရောမလူတို့အဖို့ ဩဝါဒစာဟူ သော လုသာ၏ စာအုပ်စကားချီးကို ဖတ်နေသည်ကို တွေ့ရ၏ ကိုးနာရီထိုးဖို့၁၅မိနစ်အလိုမှာ ဘုရားရှင်က ခရစ်တော်၌ ယုံကြည်သူတို့၏ စိတ်နှလုံးကို တို့ထိပြီး ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကို ရှင်းပြသောအခါ ကျွန်ုပ်သည် မဖြစ်စဖူးသော ရင်တွင်းထဲ နွေးထွေးမူကို ခံစားလာခဲ့သည်။ ခရစ်တော်ကို ကိုးစားလာသည်။ ခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ရှင်ဟူသိလာသည်ပြီး စိတ်ချမူ ရင်ထဲ၌ ရရှိလာခဲ့သည်။ ထိုသခင်က ကြွကျြွန်ုပ်။ြွက၏ြွ အပြစ်ကို ယူဆောင်သွားခဲပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ သိလာခဲ့သည်။ (John Wesley, The Works of John Wesley, third editiion , Baker Book House, 1979 reprint, volume I, p. 103).
ထိုအရာက ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲ၌ မှတ်မှတ်ရရ သိမှတ်စေ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ဂျွန်ုပ်စလီသည် ပထမနိုးကြား ရေးကာလ၌ ထိပ်ထိပ်ပြောင် တရားဟော ဆရာကြီးတပါး ဖြစ်လာခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဝီစလီသည် မာတင်လုသာ ဖေါ်ပြသော ခရစ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူ ဖြစ်ကြောင်းကို ဖေါ်ပြသော စကားလုံးကို နားထောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဆက်လက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ နှစ်ခြင်း ရှေးဦးဖခင်ဖြစ်သော ဂျွန်ဆန်ယန်း၏ အသက်တာထဲက များစွာသော အတွေ့ကြုံကို လေ့လာခဲ့သည်။ လုသာအသက်တာ ပြောင်းလဲပြီးသောအခါ မှတ်သားဖွယ် “သူ၏ကျမ်းစာကို လေ့လာပြီး ရေးသားချက်အပေါ်” အသက်တာအတွက် ပို၍ကြီးမြတ်သော အတွေးအမြင်သစ်
များကို ရခဲ့ပါသည်။ (Pilgrim's Progress, Thomas Nelson, 1999 reprint, publisher's introduction, p. xii). ဘန်ယန်းသည် နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၏ နာမည်ကြီး စာရေးဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။
မက်သဒက် အသင်းတော်ခေါင်းဆောင် ဂျွန်းစီ၀လီသည် မာတင်လုသာ၏ တရားဟောချက်များ ကို အစဉ်နားထောင်ခြင်းဖြင့် အသက်တာ ပြောင်းလဲခဲ့သူဖြစ်သည်။ နှစ်ခြင်းအသင်းတော် ခေါင်းဆောင် ဂျွန်းဘန်ယန်လည်း မာတင်လုသာ၏ ရေးသားချက်များအားဖြင့် အသက်တာ ပြောင်းလဲဖို့ တွန်းအားဖြစ် ခဲ့သည်။ လုသာ၏ ရေးသားချက်များထဲ၌ ကြီးမားသော အတုယူဖွယ် သင်ခန်းစာများရှိသော စာအုပ်ကောင်း ဖြစ်သည်ဟုထင်ပါသည်။
-ဒေသနာတော်မတိုင်ခင်၊ မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိတ်ဖက်စ်မှ ၆၆၀-၇၃၂ ၊ခုနှစ် အင်ဒယူး သီကုံး၍၊ ၁၈၁၈-၁၈၆၆ ခုနှစ်၊ ဂျွန်အမ်နီယ်လ်ဘာသာပြန်သီဆိုသော ခရစ်ယာန်တို့တွေနိုင်ပါမည်လားမှခရစ်ယာန်စစ်သည်၊
ဒေါက်တာအာရ်အယ်လ် ဟိုင်မာဂျေအာရ် ဟောကြားသည်မှာ-
“သမ္မာသတိရှိလျှက်မအိပ်ပဲ အိမ်ပဲစောင့်နေကြလော့။ သင်တို့၏ ရန်သူမာန်နတ်သည်၊ ဟောက် သောခြင်္သေ့ကဲ့သို့ အဘယ်သူကို မျိုရမည်နည်းဟူ၍ လှည့်လည်ရှာဖွေလျှက်ရှိ၏ (၁ပေ ၅း၈)
(ယောဟန် ၈း၄၄၊ ဗျာဒိတ် ၉း၁၁၊ ရောမ ၁း၂၂)
၁။ ပထမ၊ စာတန်မာန်နတ်၏ မူလဇာတ်မြစ်ကို လုသာပြောကြားချက်များသည် မှန်ကန်ပါသည်။
၂။ ဒုတိယ၊ စာတန်သည် စိတ်ပျက်အားငယ်စေသော အကြောင်းတရား၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြား ချက်သည် မှန်ကန်ပါသည်။ ယောဟန် ၃း၁၆၊ ၆း၃၇
၃။ တတိယ၊ စာတန်ထံမှလာသော ဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ခြင်းသည် ဝိညာဉ်တော်၏ အပြစ်ဖေါ်ပြခြင်းနှင့် မတူ ပါဟူသော လုသာပြောကြားချက်များသည် မှန်ကန်ပါသည်။ ၂ကော ၇း၁၀၊ တမန် ၁၆း၃၂။